Xildhibaan lagu dilay Magaalada Laascaanood | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaan lagu dilay Magaalada Laascaanood
Kooxo ku hubeysan bistoolado ayaa fuliyay dilka xildhibaanka, kaddibna waxaa la tilmaamay inay isaga baxsadeen goobta ay ku dileen Marxuumka.Ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa goobta soo garay. Iyaga oo bilaabay baaritaanno lagu raadinaayo raggii ka dambeeyay dilka.
LAASCAANOOD, Soomaaliya - Xildhibaan Cabdirisaaq Cardoofe oo kamid ahaa Golaha degaanka ee Laascanood, ee G/Sool ayaa caawa lagu dilay magaalada.
Kooxo ku hubeysan bistoolado ayaa fuliyay dilka Xildhibaanka, kaddibna waxaa la tilmaamay inay isaga baxsadeen goobta ay ku dileen Marxuumka oo ahayd meel u dhaw Gurigiisa. Ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ayaa goobta garay, iyagoo sameeyay baaritaanno lagu raadinaayo raggii ka dambeeyay falka dilka ah.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cardoofe ayaa ka mid ahaa Xildhibaannadii bishii May, ee sannadkaan kusoo baxay doorashooyinka golaha degaanka ee ka dhacday Somaliland. Ma cadda cidda geysatay falkan dilka ah.